Tallaallada über alles: Dukaamada ku yaal Hesse ee Jarmalka hadda waxay mamnuuci karaan dhammaan macaamiisha aan la tallaalin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Tallaallada über alles: Dukaamada ku yaal Hesse ee Jarmalka hadda waxay mamnuuci karaan dhammaan macaamiisha aan la tallaalin
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Tallaallada über alles: Dukaamada ku yaal Hesse ee Jarmalka hadda waxay mamnuuci karaan dhammaan macaamiisha aan la tallaalin.
Dukaammada waaweyn ee ku yaal Hesse, Jarmalka ayaa loo oggolaaday inay diidaan xaqa aan la tallaalin ee ah inay iibsadaan cunto iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah.
Siyaasadda cusub, dukaamada ku yaal Hesse, Jarmalka ayaa go'aansan kara in la dhaqan -geliyo 'xeerka 2G'.
Marka lagu daro ikhtiyaarka cusub ee 2G, shaqaalaha isbitaalka ee aan weli la tallaalin waa in laga baaraa Covid-19 toddobaadkii laba jeer.
Hesse waa gobolkii ugu horreeyay ee Jarmal ah ee oggolaada xeerka dukaamada raashinka iyo dukaamada tafaariiqda kale.
Dukaamada waaweyn ee Hesse, Germany ayaa la siiyay oggolaansho ay ku diidaan xuquuqda aan la tallaalin ee ah inay iibsadaan cunto iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah, taasoo Hesse ka dhigaysa dowladdii ugu horreysay ee Jarmal ah ee u oggolaata ganacsiyada inay diidaan helitaanka tallaalka xitaa waxyaabaha daruuriga ah.
Wasiirka Hesse-Volker Bouffier
Xeerka cusub ee dhigaya tusaalaha dhibta leh iyadoo derisyadu ay la halgamayaan mudaaharaadyo looga soo horjeedo waajibaadka tallaalka ayaa waxaa si rasmi ah u xaqiijiyey guddoonka gobolka.
Siyaasadda cusub, bakhaarradu waxay go'aan ka gaari karaan in la hirgeliyo 'xeerka 2G', taas oo macnaheedu yahay oggolaanshaha gelitaanka oo keliya tallaalka iyo bogsashada ('geimpft' iyo 'genesen' ee Jarmalka) ama ka sii daran 'xeerka 3G', oo ka kooban kuwa laga baadhay fayraska (getestet).
Wasiirka Hesse-Volker Bouffier wuxuu sheegay inuu rajeynayo in xeerka cusub aan si ballaaran loo dhaqangelin doonin, isagoo sharraxaya: "Waxaan filaynaa in ikhtiyaarkan la adeegsan doono maalmaha qaarkood oo ganacsiyada daboolaya baahiyaha maalinlaha ah aysan adeegsan doonin."
“Ilaalinta ugu weyn waxaa bixiya tallaalka. Hadana wali waa mid aan dhib lahayn, waa bilaa -buqraafiyadeed waana xor in la helo, ”ayuu yiri Herr Bouffier, isaga oo xusey in daboolidda iyo shuruudaha fogeynta bulshada ay ku sii jiri doonaan meheradaha ku guuldareystay qaadashada qawaaniinta 2G ee ka saarida badan.
Beddelidda oggolaanshaha kaliya dadka la tallaalay ama soo kabsaday, meheradaha 2G waxaa loo oggol yahay inay iska daayaan kala -fogeynta bulshada iyo waajibaadka maaskaro - laga yaabee inay tahay isku -dheellitirnaan dammaanad leh ka dib 18 bilood oo daboollo weji culus leh.
Marka lagu daro ikhtiyaarka cusub ee 2G, shaqaalaha isbitaalka ee aan weli la tallaalin waa in laga qaadaa COVID-19 asbuucii laba jeer, ardaydana waxaa weli laga rabaa inay isqariyaan markay fadhiyaan fasalka.
Halka ugu yaraan siddeed kale Jarmal Dawladuhu waxay u fureen ikhtiyaarka 2G meheradaha qaarkood sida baararka, maqaayadaha, jimicsiyada, shineemooyinka iyo dhilooyinka, Hesse waa kii ugu horreeyay ee oggolaada xeerka dukaamada raashinka iyo dukaamada tafaariiqda kale.
In kasta oo waddammada kale ee Yurub sida Talyaaniga iyo Faransiiska ay hirgeliyeen shuruudo adag oo tallaal ah oo ka mamnuucaya dadka aan la tallaalin inay ka shaqeeyaan (Talyaaniga) ama wax ka cunaan makhaayadaha (Faransiiska), hoggaamiyeyaasha badankood waxay joojiyeen inay si toos ah ugu amraan jabsashada muwaadiniintooda.
Xaaladda “Hesse” ee Jarmalka ayaa awood u siisay suuqyada waaweyn si ay u mamnuucdo Tallaalka - Society Prussian of America wuxuu leeyahay,
Oktoobar 17, 2021 at 02: 52